Talyaaniga oo lacag deeq ah ku celiyey Sacuudiga - BBC News Somali
Talyaaniga oo lacag deeq ah ku celiyey Sacuudiga
Guriga La Scala opera ee talyaaniga ayaa lacag ka badan €3 million (£2.5m; $3.4m) uso celinaya Sacuudiga Kaddib markii qorshaha maalgalinta ee boqortooyada ay sababtay banaan bax dadwayne.
Heshiiskan ayaa u saamixi lahaa wasiir dhaqanka ee sacuudiga in uu kursi ka helo guddiga.
Diiwaanka xuquuqda aadanaha ee Sacuudi Carabiya ayaa u xiran baaritaanno lagu wado awgood, kaddib markii dilka saxafiga Jamal Khashoggi lagu qabtay qunsuliyada Sacuudi Carabiya ee ku taala Istanbul bishii October.
Qorshaha iskaashiga waa la dhaleeceeyay waxaana dhaleeceeyay kooxaha xuquuqda u dooda iyo siyaasiyiinta.
Sacuudiga: 'Waxaan u baxsaday inaan nolol wanaagsan helo'
"Waxaannu si buuxda u go'aansannay inaanu soo celinno lacagta," ayuu yiri madaxwaynaha opera house Giuseppe Sala, oo sidoo kale ah duqa magaalada Milan, warbaaxinta ayuu na la wadaagay ka dib markii uu kulan la yeeshay guddiga Isniintii.
Waxaan dib ugu laaban doonaa hoos. Waan arki doonaa haddii ay jiraan fursado kale oo wada shaqeyn ah. " Sheekada Jamal Khashoggi ilaa iyo hadda lisku haystaa.
€ 3m oo la bixiyay ayaa qeyb ka ah € 15m oo la soo jeediyay qaybna ka aheed wada-shaqeyn shanta sano ee wasaaradda dhaqanka Saudi
Laakiin qorshaha ayaa keenay dhaleeceyn ballaaran , oo ay ku jiraan xubno ka tirsan xisbigii talada haya ee Talyaaniga.
Hogaamiyaha horyaalka iyo ra'iisal wasaaraha Matteo Salvini ayaa ku boorriyay in opera houseku uu xajisto heshiiska halka guddoomiyaha gobolka Lombardy, oo sidoo kale xubin ka ah xisbiga , uu dalbaday agaasimaha fanka ee opera house Alexander Pereira, in la ceyriyo
Mr. Sala ayaa sheegay in Mr Pereira, in uu wadahadal heshiis la galay uu na sii wadi doono shaqadiisa.
Ma jiraan wax faallo ah oo ay ka heleen ilaa iyo hada saraakiisha Sucuudiga.
Sucuudi Carabiya ayaa ku eedeysay dilka Jamaal Khashoggi wakiilada lidka ku ah waxayna sheegen in
been abuur laga sameeyay amiirka talada sugayo ee Mohammed bin Salman uu howlgalka lagu dilay Jamaal Khashoggi wax ka ogaa .